71 ပြက်ရယ်ပြုထားသောစကားစုများသည် | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဘယ်သူရယ်မောချင်တာလဲ။ အပြုံးနှင့်ရယ်မောခြင်းသည်ဘဝ၌မည်သည့်အချိန်၌မဆိုဝိညာဉ်အတွက်ကုထုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်တစ် ဦး တည်းပင်လျှင်ပြုံးရွှင်စွာရယ်မောခြင်းထက် ပို၍ ကျန်းမာသန်စွမ်း။ လှပသောအရာမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကတော့ရယ်မောတာကိုမျှဝေတာဟာမင်းကိုအကောင်းဆုံးရယ်မောတာပါပဲ။
ဘ ၀ ကိုဟာသအဖြစ်မယူရန်၊ သို့သော်ဟာသကိုယူရန်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်တစ်ချိန်ကသာအသက်ရှင်သည်။ အမြဲတမ်းအမျက်ထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏စွမ်းအင်ကိုသိမ်းဆည်းထားသောအပျက်သဘောဆောင်သောအရာများကိုတွေးတောခြင်းသည်မထိုက်တန်ပါ။
ဤအကြောင်းကြောင့်သင်သည်ကောင်းမွန်သောဘဝနေထိုင်ရန်နှင့်ကောင်းမွန်သောခံစားချက်ရှိရန်ဘဝကိုနေထိုင်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်အနည်းဆုံးသင်ပြုံးနိုင်စေရန်ရယ်မောခြင်းအချို့ကိုသင်နှင့်မျှဝေချင်သည်။ သင်သူတို့ကိုနှစ်သက်ပါကလူအများအားသူတို့အားဝေမျှရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပျော်စရာကောင်းသောအချိန်နှင့်ဘဝကမ်းလှမ်းထားသောအရာအားလုံးကိုခံစားရန်ထိုက်တန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤရယ်စရာစကားစုများနှင့်သင်၏စိတ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
အရာအားလုံးဟာပျော်စရာကောင်းတယ် ... နေသမျှကာလပတ်လုံးတခြားသူတစ်ယောက်ကိုဖြစ်ပျက်သမျှ။
သင့်အတွက်တံခါးများဖွင့်ပေးမည့်စကားလုံးနှစ်လုံးရှိသည် - Pull နှင့် Push ။
သငျသညျစိုစွတ်ဖို့ကလျက်, သင်ကရပ်တန့်ဖို့ကစို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်ထည့်သွင်းရန်ကတွန်းအားပေးရန်ရှိသည်။ ချည်တစ်အပ်ကိုထားရန်ဘယ်လောက်ခက်ခဲ!
အားကစားလုပ်ပြီးနောက်ငါပီဇာရှိသည်။ နောက်နေတာ၊ ငါပီဇာမစားဘူး၊ အားကစားလည်းမဟုတ်ဘူး။
သင်တစ် ဦး ကူညီလက်ရှာဖွေနေလျှင် ... သင်၏လက်မောင်းရဲ့အဆုံးမှာရှာပါ!
ဒီဘ ၀ မှာမင်းကအနိုင်ရတာကိုရပ်လိုက်ရင်မင်းကိုခွင့်မလွှတ်ဘူး။
အကယ်၍ သင်သည်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်သင်၏ရည်းစားကိုတွေ့ပါကအသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ အေးအေးဆေးဆေးနေပါ၊
လူတစ် ဦး စုံလင်ခြင်းနှင့်အနီးဆုံးဆုံးသောနေရာသည်သူတို့လျှောက်ထားသည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်ကြိယာသည် "မဖြစ်သင့်သည်" ဖြစ်သနည်း။ မပြည့်စုံတဲ့ကွန်ဒုံးလား
ဘာကြောင့် Windows ကိုပိတ်ဖို့ Start ခလုတ်ကိုသွားရမှာလဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော့်ဇနီးကငါ့ကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့တယ်။ ငါ့ ဦး ချိုတွေကမထွက်သေးဘူး။ ကယ်လ်ဆီယမ်မလိုအပ်ဘူးလား။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားမှာအလှပဆုံးစကားလေးလုံး - မင်းကိုငါပြောပြပြီးပြီ။
ငါပျင်းရိခြင်းအဘို့အဆုအနိုင်ရခဲ့လျှင်, ငါ့အဘို့အတက်ကောက်ဖို့တစ်စုံတစ် ဦး ကိုပေးပို့လိမ့်မယ်။
Jellyfish သည်နှစ်သန်းပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ကိုမျိုးစိတ်တစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ရှင်သန်ခဲ့ပြီး ဦး နှောက်မရှိဘဲရှင်သန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကလူအတော်များများမျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။
လူတွေကမင်းကိုမင်းကိုမပြစ်မှားခင် "ဘာအပြစ်မှမရှိ" လို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး က“ ဘာလဲ” လို့ပြောတဲ့အခါသူမကမင်းကိုမနားမထောင်ဘူး။ မင်းပြောတာကိုပြောင်းလဲဖို့အခွင့်အရေးပေးတယ်။
ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမထိခိုက်စေလို ... သင်၏မျက်နှာနှင့်အတူ, သင်အလုံအလောက်ရှိသည်။
သငျသညျ maddened ရသောအခါ, သငျသညျအဘယျသို့သွားရမလဲ
ရဲအရာရှိတစ် ဦး ကကျွန်တော့်ကိုရပ်ပြီး“ စာရွက်စာတမ်းများ” လို့ပြောတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကတ်ကြေးနဲ့ငါအနိုင်ရလိုက်တယ်။ ငါထားခဲ့တယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် WiFi နှင့်တူသည်၊ ၎င်းသည်လေထဲတွင်ရှိနေသော်လည်းလူတိုင်းတွင်သော့မရှိသည်မဟုတ်ပါ။
တောင်သည်သင့်ဆီသို့ရောက်လျှင် ... ပြေးပါ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » 71 သင်ချိုးဖောက်ဖို့ထားသောစာပိုဒ်တိုများရယ်မော